We Fight We Win. -- " More than Media ": သန်းရွေ ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုမှတ်တမ်း
သန်းရွေ ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုမှတ်တမ်း
သန်းရွေ ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာ မူ များ ကို ဒီမှတ်တမ်းမှာကြည့်နိင်ပါ
စက်တင်ဘာ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီးအား နအဖ မှ ရက်ရက် စက်စက် နိမ်နင်း ခဲ့ပုံ ကို ဒီ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းမှာ ကြည့် ရူနိင်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းကိုရိုက်ကူး ပြီး ပြည်သူလူထုသိရှိရန် တင် ပြပေးခဲ့တဲ့ Peacock 88 အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်း ဗီဒီယို ဟာ မည်သည့် သင်းဌာနတွေမှာ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ ရွေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု မှ စီအန်အန် သတင်းဌာနကို ပေးပို့ ထားပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်းကိုအလိုရှိသူများ မူရင်း Quality အတိုင်းအလိုရှိပါက wefightwewin@gmail.com နှင့် ၆၄၆-၄၁၃-၈၆၃၁ ကိုဆက်သွယ်နိင်ပါတယ်။ အခမဲ့ ဖြန့် ချီပေးပါမယ်။
can you post with bigger screen
treating like animals
ကျမတို့ ကိုဒီရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ ဗီဒီယိုကိုကြည့် ခွင့် ရတဲ့ အတွက် နာကျင်ကြေကွဲ တဲ့မျက်ရည် နဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ့် လူမျိုးအချင်းချင်း ခလေး၊လူကြီး၊မိန်းမ မကျန် ရက်ရက်စက် ရိုက်နှက်၊သတ်ဖြတ်နေတာတွေ၊မချိမဆန့် အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေသံတွေ၊ငယ်သံပါအောင် အော်မြည်ရင်းတောင်းပန်နေသံတွေ၊လက်နက်ကိုင်ပြီး အားမာန်အပြည့် ကို ရန်သူလိုသဘောထားပြီး ပက်ပက်စက်စက် ရိုက်နေတာတွေ၊.......ကျမ ကို
ကျမ တသက် ၊သူတို့ တသက်၊ကျမတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ကကျမတတ်နိုင်တဲ့ ဖက်က လက်စားချေမယ်ဆိုတာ ဂတိပေးပါတယ်။
အစော်ကားခံခဲ့ ရတဲ့သာသနာတော်အတွက်၊ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ကျမ နက်နက်နဲနဲ ကိုတန်ပြန်လက်စားချေရမှာ သာ ကျမ ဘဝမှာ အသက်ရှင်သန်မှုဟာ အဓ္ဓိပါယ်ရှိတော့ မယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ၊ဘယ်လိုနားလည်ပေးမှုနဲ့ မှ ခွင့် မလွှတ်ဘူး။
တူဖြစ်တုံးနှံထား...ပေဖြစ်ရင် ခံကြတော့ ...မဝေးတော့ ဘူး၊
မမေ့ လိုက်ကြပါနဲ့ ......မမေ့ လိုက်ကြပါနဲ့ ...အိမ်မက်တွေမဟုတ်ဘူး၊......
25 December 2007 at 12:45
အနော်ရထာလမ်းနဲ့ ၃၃ လမ်းထောင့် ပါသေချာပါတယ် ခင်ဗျာ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ မေးကြည့်ပြီးပါပြီ
နောက်ခံ အသံတွေမှာ တမင်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
25 December 2007 at 15:35
Don't advartise yourself,You must know yourself what to do.shame on you for selfish and left the ABSDF comrades. it's your biography.
29 December 2007 at 00:37
Don't advartise yourself.You should know what to do.Shame on you about selfish and left the ABSDF comrade.You're traitor.
29 December 2007 at 00:41
29 December 2007 at 00:42